Ogaden News Agency (ONA) – Suuriya, Ciraaq, Yemen & Liibya oo Hadheeyay Ajendaha Shirwaynaha Jaamacada Carabta.
Suuriya, Ciraaq, Yemen & Liibya oo Hadheeyay Ajendaha Shirwaynaha Jaamacada Carabta.
Posted by Daljir	/ July 27, 2016
Madaxda ururka dalalka Jaamacada Carabta ee ka qeyb qaadanaya shirweynaha Carabta ee kasocda caasimada dalka Mauritania ee Nuwaaqshood ayaa ballan qaaday isla markaana wacad ku maray in ay ka adkaan doonaan argagaxisonimada.
Shirkan ayaa waxaa shir gudoon ku ah madaxweynaha Mauritania, Maxamed Waldi Abdelaziiz. Shirkaa ayaa furmay shalay asagoo lagu qabtay teendho weyn oo ku taala caasimada dalkaa ee Nuwaaqshood. Ajendayaasha shirkan ayaa waxaa ugu horeeya dhibaatooyinka ka taagan dunida Muslimka gaar ahaan dalalka Carabta weliba Suuriya, Ciraaq, Yemen iyo Liibiya.
Raisul wasaaraha Masar ayaa halkaa ka hadlay oo sheegay in faragalinta shisheeyuhu sababtay in gobolka ay kasoo baxdo fallaagada Daacish oo aad u dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Dhanka kale, madaxweynaha Yemen ayaa ugu baaqay fallaagada dalkaa ka dagaalanta ee Xuutiyiinta inay soo wareejiso hubka. Wali waxaa Yemen kasocda duqeynta ay wadaan Sacuudiga iyo xulufadiisu. Wuxuu intaa ku daray in duqeyntu rajo keeneyso.
Ilaa 9,000 oo qof ayaa lagu dilay Yemen laga soo bilaabo markii duqeynta Sacuudigu bilaabay waqtigaa oo ahaa bishii Maarso ee sanadkan. Dadka badankoodu waxay ahaayeen rayid sida laga soo xigtay QM.
Waxaa sidoo kale dagaalkaa ku barakacay 2.8 m oo qof. Waxyaabaha kalee shirka lagu qaadaa dhigayo ayaa waxaa kamid ah sidii dib loogu bilaabi lahaa wada hadaladii u dhexeeyay Falastiiniyiinta iyo Israaiil.